China FIDO Jars fekitori nevatengesi | Zvakanakisa
Carton uye Pallet
Kusvitswa T ime :
Pamazuva makumi matatu mushure me sampuro uye kurongeka zvakasimbiswa (kusisanganisira zvimwe zvigadzirwa zvekugadzirisa kana odha yakakosha)
Kune vane hutano vanoziva, kunevanoda, kune anofarira chikafu, kune yakachena mutserendende. Chero chaunoratidza senge, chirongo ichi chinosungirwa kuzadzisa zvaunoda. Yakagadzirirwa muItari yegirazi yakajeka, iine yakavhurika yakawanda yekuwana nyore uye chifukidziro chemhepo.
1. Mhepo Yekunze
Sarudza. Iwe une nzira. Chisimbiso chemweya pane chirongo chinochengetedza hutsva uye kunhuwa kwechikafu chako, pamwe nekudzivirira kunobuda. Dyisa mhuri yako zvakanyatsonaka uye zvakanakisa chete.
2. Kwakajeka kwazvo kuti uone
Kuziva ndiko kudzora. Iyo mbiya yakavezwa yegirazi inoratidzika zvakajeka, ichikupa iwe maonero akanaka ezviri mukati. Inosanganisirwa nekodhi yebhodhi zvekunyora uye kuratidza.
3. Kuwanika Nyore
Mufaro mune chirongo, hapana kurwa kunobatanidzwa. Iko kuvhurika kwakakura kunoita kuti iwe usvike mukati kuti uwane nyore kuwana uye kuzadza. Hinged chifukidzo inoshama kuvhurika uye kuvhara pasina iwe unofanirwa kurwisa.
4. Inokodzera Izvo Zvese
Mitoro uye mitoro yezvakanaka mune imwe chete jar. Usafuratira, usakanganise, usafunge kaviri. Iyo mbiya yakakura zvakakwana kuti ikwane huwandu hwakakura zvakakwana kuti ugutse zvaunoda.
Yepfuura: Girazi Condiment Mapani ane mairi-mu-Mumwe marinhi
Inotevera: Girazi Kuchengetedza Jar neCork
Akananga-akasendama Tube Vials ane Cork Stopper (D30)
Square Girazi Ekuchengetedza Jar ne Multi Colour Plast ...
Tube Vials ane Bronze Metal Flat Pamusoro Screw Ca ...
Bulb Glass Inwa Bhodhoro
Wose Mouth Mason Glass Mitsipa Quilted Crystal ...